एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए, आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खसेर त्रिशुलीमा पुग्यो, म पौडी खेलेर बाहिर निस्किँए, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन – AB Sansar
May 16, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए, आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खसेर त्रिशुलीमा पुग्यो, म पौडी खेलेर बाहिर निस्किँए, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन
छोरी जेनिसाको केही समय अगाडि पत्थरीको अप्रेसन गरिएको थियो । तर अप्रेसन गरेको ठाउँमा इन्फेक्सन भएर थप उपचार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि घर परिवारमा सल्लाह गरेर काठमाडौं जाने निधो गर्यौं । हिजो साँझ लु.१ च. ९७३१ नम्बरको जिपमा म, छोरी जेनिसा र श्रीमती जमुना काठमाडौंका लागि हिँड्यौँ । जिप चालक सूर्य केसी थिए ।
यात्रा राम्रैसँग चलेको थियो । बिहानीपख निद्राले अलि झकाएको थिएँ । एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए । आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो र त्रिशुलीमा पुग्यो । बग्दै गरेको गाडीको झ्याल ढोका खोल्ने प्रयास गरेँ । मैले अलिकति पानी पनि पिइसकेको थिएँ । अब सक्कियो भन्ने लागेको थियो । केही तल पुगेपछि संयोगले ढोका वा झ्याल के खुल्यो । म बाहिर निस्किएँ । तर, ड्राइभर, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन । पौडी खेलेर नदी पार गरेँ ।
मैले गुहार माग्न चिच्याए । तर कसैले सुनेन । मुस्किलले राजमार्गमा आएँ । काठमाडौंबाट आउँदै गरेको ट्रकलाई रोकेर घटनाबारे बताएँ । ट्रक ड्राइभरले प्रहरीलाई खबर गरे । मुग्लिनबाट प्रहरी टोली तुरुन्तै घटनास्थल पुग्यो ।
भारतमा आँधी : ४ को मृ’त्यु, केरलमा भारी वर्षा:भोली देखि नेपालमा पनि खतरा
November 30, 2020 Admin01
४० वर्षसम्म भारतका विभिन्न जेलमा बन्दी जीवन बिताएर दुर्गाप्रसाद तिम्सिना
March 21, 2021 Admin01
तपाई अमेरिका जान चाहानुहुन्छ? डीभी लोटरी बाहेक अर्को विकल्प यस्तो छ